Ngaphezu koko, ulungiselelo Internet iinkonzo kwi-Mexico monopolized kwaye ulahlule, Uthixo uyala, phakathi ezintathu iinkampani, ngoko ke kanjalo iza-Intanethi nge a abazinikeleyo umgca, kuba efanayo, apho kuza lwethelevijini uphawu (efanayo inkqubo kwi-United States) njengoko ngenxa yezi zimbini imibandela ingaba inflated iindleko Internet iinkonzo (uthelekiso kunye Russian) kwaye hayi esihle kakhulu umgangatho.
Ukuba ufuna ukuthetha isispanish, uyakwazi ukuhamba jikelele Mexican zephondo, kwaye ngokucacileyo ukubona oku. Umzekelo, creepy immaturity kweli shishini iya kuyizisa kwakhona kwi-site kwisixeko iibhasi kwi-Guadalajara: kweli lizwe, phantse akukho nto engenakwenzeka ukufumana kwi-Intanethi. Eyona nto egciniweyo nathi kwaye iingcaphephe oriented kwi-Guadalajara kwaba e, apho, endleleni, asingawo iphawulwe elungileyo inxalenye amaziko. Kubonakala ukuba kuphela ephambili entrepreneurs ndafunda ukusebenzisa i-Intanethi kwaye nkqu xa wathi kuyo malunga ngokwakho. Ewe, ekubeni kwesi sixeko, mna seriously umona I-hawks, abo bathe emangalisayo i-eyona imbi khetho kuba ndine ezingabonwayo ebomini, nangona kunjalo, omnye eyona zephondo kweli lizwe. Kanjalo ethandwa kakhulu Bulletin Ibhodi baya kuba ngu-Jikelele, ukuba unalo ulwazi isispanish ulwimi kunye nomonde ukusebenza kunye Mexicans, uyakwazi ngokukhuselekileyo gcina le Mexican kwimakethi ngoba ongenanto. Wam amava, likhulu popularity enjoys ngayo, yena imisebenzi njengoko a Bulletin Ibhodi kwaye ka Dating site, njalo-njalo.
kubonakala kum ukuba popularity kuya kubakho ukusebenzisa ezahlukeneyo iintlobo ezininzi ezonakeleyo bathengise, kuthengiswa tickets, ordering i taxi (hayi kuphela ukuba, asingabo bonke taxis kuba iwebhusayithi, ngoko ke, asingabo bonke enye into ngu-a ifomu ordering iinkonzo ekhaya, oku kwiziganeko eziliqela kufuneka umnxeba), replenishment ka-iselula ungqinelwano (kwabakho esi sinye iwebhusayithi kunye kule nkonzo, kodwa kubalulekile ngoko ke amahlwempu ukuba iqhube njenge njengokuba prostitute, kwaye hayi into yokuba izibonelelo) Kwaye nkqu kwi-Mexican Internet, phantse wonke imveliso zithengiswe kwi-stores, sele eyakhe iphepha loluntu networks, ngaphezu koko, nkqu ibhasi sele eyakhe Itwitter kwaye Facebook iphepha.
Andiqinisekanga yintoni, apparently kuba fun
← Amava elide utyelele Mexico (i-cancun)
Njani ukwazi ukuba isiturkish umntu ezinzima kwi budlelwane - Quora →